Manaova fanatanjahantena - Ahoana ny fandefasana spam referendum amin'ny Google Analytics
Misy fanontaniana iray izay manohintohina ny sehatra an-tserasera: ahoana no hanivanako ny spam referral? Google dia nanasitrana azy ireo nefa mbola aseho amin'ny tranonkala. Azonao atao ny manomboka amin'ny Google Analytics Solutions Gallery, saingy ny vahaolana dia tsy izany tsotra izao.
Tsy maintsy mahatakatra zavatra maromaro ianao, notendren'i Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt :
1. Afaka miatrika zavatra maro hafa ianao, fa tsy bots fotsiny ihany.
2. Fitaovana am-pahendrena
3. Andramo ny fanakanana ny bota rehetra.
4. Ampahafantaro ny olona rehetra manondro ny spam.
5. Mamoròna sivana maromaro miaraka amin'ny marika 'ratsy referrer'.
6. Ny mainty hoditra rehetra
Tsy ny boka rehetra no ratsy
Misy diso hevitra fa ratsy ny boka rehetra. Tsy marina izany. Ny sasany toa an'i Bingbot sy ny Googlebot dia manao ny fikarohana. Ny hafa dia mety tsy mikaroka bots, fa tsara foana. Ny ohatra tonga lafatra dia DeepCrawl, SpyFu ary Screaming Frog..
Ireo izay tianao holazaina dia ireo izay misintona ny fifamoivoizan'ny tranonkala, mikaroka lozam-pifamoivoizana ao amin'ny rafitry ny fitantanana votoatinao (CMS & # 41, na ireo miezaka manaparitaka ny votoatinao amin'ny tanjona ratsy. Manahy momba ireo tranokala na kaonty mitantana ny fitaterana tranonkala tsy ilaina.
Afindrao ny sariohatra fitadiavanao
Tokony ho fantatrao izay tokony hatao. Ity toro-lalana ity dia tokony hanampy:
tsindrio ny 'Tag' Admin
mikaroka amin'ny sehatra havanana, tadiavo ny 'View' ary tsindrio ny menu-nao
misafidy 'Mamorona New View'
misafidy ny fotoana mety, ary efa vita
Sasao ny botsoana fantatra amin'ny fampiasana Google Analytics
Miala matetika amin'ny 75 - 85% amin'ny boka ratsy rehetra izany. Ary raha ampiana izany, ny lisitry ny bots dia havaozina tsy tapaka. Mankanesa any amin'ny fijery vaovao ary tsindrio ny safidy momba ny fanamarinana aorian'izany dia asehonao ny manaisotra ny fehin-keviny amin'ny safidy bots sy ny spiders fantatra. Manaova teboka manamarina ny lisitra fa indraindray botsaka tsara ary ny rohy referral dia mety voasakana.
Azonao ampidirina amin'ny lisitra maintimainty
Na inona na inona araka ny eritreritrao, ny Google Analytics, dia mety hanala ireo mpamadika izay manefa ny saran-dalan'ny toetr'andro mora foana. Amboary ity angon-drakitra ity amin'ny fampiasana metric metadisana. Ireo izay manana fepetra avo lenta dia tokony ho eo an-tampony. Andramo izao ny lisitra ary esory ireo paompy ratsy.
Mamorona sivana ho an'ny mpamadika ratsy
Manaraka ireto dingana ireto:
mankany amin'ny Hijery ary Filter
misafidy sivana misimisy ary manamboatra custom
Fidio ny Custom izay arahin'ny Exclude
misafidy ny loharanon'ny fanentanana ary dia farafaharao amin'ny lisitr'ireo mpitsidika rehetra tianao hotratrarina
Atsaharo ny boka ratsy avy amin'ny tranokalanao
Noho izany dia mila fahalalana ara-teknika ianao. Midika izany ny fanovana ny rakitra .htaccess sy ny tranokala hafa config. Tsy maintsy manana backup ianao rehefa manomboka io. Ny tsara indrindra amin'ity fomba ity dia izao:
1. Ny mpizara amin'ny serivisy dia hihazakazaka lavitra noho ny fifamoivoizana izay manosika azy ho haingana
2. Tsy hitsidika ny pejin'ny analytics anao matetika ianao
Inona no tokony ho fantatrao:
na dia samy hafa aza ny mpitsidika sy ny bots, dia mihamaivana ny servero.
azonao atao ny manakana ny roa etsy ambony amin'ny fampiasana ny IP na azy na mampiasa domains ambony.
mitandrema mba tsy hanivananao zavatra tsara Source .